Ukwakhiwa I-grill yamuva yaseNyakatho Melika, indawo yokuphumula yama-cocktail kanye nethala ophahleni eliseMidtown Toronto igubha imenyu yeklasikhi ephuculisiwe neziphuzo zokusayina ezingenayo. Indawo yokudlela yase-Arthur inezikhala ezintathu ezihlukile zokuzijabulela (indawo yokudlela, ibha, nephahla ophahleni) ezizizwa zisondelene futhi zinamabala ngasikhathi sinye. Uphahla luhlukile ekwakhiweni kwalo kwamaphaneli enkuni ahlelwe ngefenisha yokhuni, lwakhiwe ukuthuthukisa ukwakheka kwegumbi, futhi lilingise ukubukeka kwekristalu lokusika elenga ngaphezulu.
Ukuhlekisa Indlu Yezingane
Ukuhlekisa Indlu Yezingane Le ndlela yokwakha eyenzelwe izingane ukuthi ifunde futhi idlale, okuyindlu eyi-Fun ngokuphelele evela kubaba omkhulu. Umklami wahlanganisa izinto ezinempilo nezinhlaka zokuphepha ukwenza isikhala esihle nesikhangayo. Bazama ukwenza indawo yokudlala yezingane ethokomele nefudumele, futhi bazama ukuqinisa ubudlelwano babazali nengane. Iklayenti litshele umklami ukuthi afinyelele izinhloso ezi-3, okwakungu: (1) izinto zemvelo nezokuphepha, (2) zenza izingane nomzali bajabule futhi (3) zinesikhala esanele sokugcina. Umqambi uthole indlela elula futhi ecacile yokufeza inhloso, okuyikhaya, yona kanye indawo yezingane.
Ingaphakathi Lendlu Siyini isikhala sendlu? Umklami ukholelwa ukuthi umklamo uvela ezimfunweni zomnikazi, ofinyelela umphefumulo esikhaleni. Ngakho-ke, umklami wazula inhloso yabo yesikhala ngabathandekayo abathandekayo. Bobabili umnikazi bayazithanda izinto zokwakha kanye nesixazululo sokwakhiwa okuhlobene nesiko laseJapan. Ngokumelela izinkumbulo phakathi kwezingqondo zabo, banquma ukusebenzisa ukuthungwa okuhlukahlukene kwezinkuni ukwakha indlu yomphefumlo. Ngenxa yalokho, bakha izinhloso ezi-3 zokuvumelana kwale ndlu enhle, okwakungu (1) umkhathi we-Quiescent, (2) Izikhala zomphakathi eziguquguqukayo nezihehayo, kanye (3) nezindawo zangasese ezikhululekile nezingabonakali.
Indlu Yezinkumbulo Le ndlu idlulisela izithombe zasekhaya ngemishayo yezinkuni kanye nesitaki esimile sezitini ezimhlophe. Ukukhanya kusuka ezikhaleni zezitini ezimhlophe ezizungeze indlu, kudaleke umoya okhethekile weklayenti. Umqambi usebenzisa izindlela eziningi ukuxazulula ukulinganiselwa kwalesi sakhiwo izindawo zokupholisa umoya nezindawo zokugcina. Futhi, hlanganisa izinto zokwenziwa nememori yeklayenti bese wethula ubuhle obufudumele nenhle ngesakhiwo, oxhumanisa isitayela esiyingqayizivele sale ndlu.
Ingaphakathi Lendlu Le yindlu yokubonisa indlela yokuphila eyingqayizivele yomhambi, okuyi-graphic designer kanye nekhaya losomabhizinisi. Umqambi wethula izinto zemvelo ukukhombisa okuthandwa ngumvakashi futhi alondoloze izindawo ezingenalutho ukugcwalisa izinto zelungu lomndeni. Ikhishi liyisikhungo sendlu, liklanyelwe ngokukhethekile ukubuka okuzungezile kwabavakashi futhi baqiniseke ukuthi abazali bangabona noma kuphi. Indlu ifakwe i-white granite floor ngaphandle komthungo, umdwebo wamaminerali wase-Italiya, ingilazi esobala, nenhlanganisela ye-powder emhlophe ukwembula imininingwane enhle yezinto zokwakha.
Perception I-Cafe Mgqibelo 25 Juni
Poise Isibani Setafula Eliguqukayo Lwesihlanu 24 Juni
Memento Incwadi Evulekile Lwesine 23 Juni
Ukwakhiwa Ukuhlekisa Indlu Yezingane Ingaphakathi Lendlu Indlu Yezinkumbulo Ingaphakathi Lendlu Ingaphakathi Lendlu